Howlgallo Jihaadi Ah Oo Ka Kala Dhacay Banaadir, Gedo, Jubbooyinka Iyo Bay Iyo Bakool. – Bogga Calamada.com
Ciidamada xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab ee ka howlgala bariga Africa waxay saacadihii lasoo dhaafay weeraro jihaadi ah ka fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka Soomaaliya kuwaas oo siyaabo kala duwan loogu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa Soomaalida.
Howlgalka koowaad oo ahaa dagaal toos ah waxay ciidamada shabaabul Mujaahidiin gaar ahaan jamhadda wilaayada Banaadir waxay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ka samaysteen Shaneemo Cabdi Waayeel ee degmada Heliwaa.
Dhanka kale waxay ciidamada shabaabul Mujaahidiin weeraro xooggan oo si wanaagsan loo qorsheeyay ku qaadeen saldhigyada ciidamada xabashida Itoobiya iyo kuwa dowladda Federaalka ah ay ka samaysteen garoonka macmalka ah iyo gudaha magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
Goobaha ay xalay ciidamada Mujaahidiintu weerarada ka fuliyeen waxaa ka mid ah saldhigyada ciidamada Kenya ay ka samaysteen deegaannada Kulbiyow iyo Qooqaani oo ka tirsan wilaayada Jubbooyinka waxaana halkaas ka dhacay dagaallo is xig-xigay oo la isku adeegaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Dhanka wilaayada Bay iyo Bakool waxay ciidamada jamhadda Mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadaas xalay weerar aad u xooggan ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ah ay ka samaysteen degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Dagaalladan ka kala dhacay wilaayaadka Banaadir, Gedo, Jubbooyinka, iyo Bay iyo Bakool waxay ilo muhiim ah soo wariyeen in si xun loogu jabiyay ciidamada shisheeye iyo kuwa Soomaalida waana qayb ka mid ah howlgallada Mujaahidiinta ee sida wanaagsan uga socda wilaayaadka dalka Soomaaliya.